यस्तो छ करिब ५ अर्ब भन्दा पनि बढी रुपैयाँमा बनेको एप्पलको हेडक्वार्टर र एप्पल पार्क | Khabar Sadan खबर सदन
Home ज्ञानज्ञुनकाहरू कुरा यस्तो छ करिब ५ अर्ब भन्दा पनि बढी रुपैयाँमा बनेको एप्पलको हेडक्वार्टर...
यस्तो छ करिब ५ अर्ब भन्दा पनि बढी रुपैयाँमा बनेको एप्पलको हेडक्वार्टर र एप्पल पार्क
– एप्पलको नयाँ मुख्यालय, जसलाई एप्पल पार्क पनि भनिन्छ । त्यसको निर्माण चार वर्ष लगाएर सन् २०१७ मा सम्पन्न भयो । उक्त भव्य भवन निर्माण गर्न एप्पलले पाँच अर्ब डलरभन्दा धेरै रकम खर्चिएको थियो ।
आजको समयमा पृथ्वीको सबैभन्दा महङ्गो भवनमध्येमा एप्पल पार्क पनि पर्दछ । तपाईंहरु धेरैलाई जिज्ञासा होला, आखिर एप्पल पार्कमा के छ त्यस्तो, जसका लागि एप्पलले पाँच अर्ब डलरभन्दा धेरै लगानी गर्‍यो।
आज हामी एप्पलको मुख्यालयभित्रको संसार नियाल्ने छौं । यो भवनलाई विशेष बनाउने सुविधा र भवनका विशेषताहरु बारे बुझ्ने छौं ।
प्रसंगको सुरुवात गरौं एप्पलको मुख्य भवनबाट । जसलाई रिङ भनिन्छ । चार तले गोलाकार यो भवनमा १२ हजार भन्दा धेरै कर्मचारी काम गर्छन् ।
भवनको भित्री र बाहिरी बरण्डामा निकै लामो वाक वे (हिँड्न मिल्ने लेन) लाइन छ । यो भवनमा एउटा कुनाबाट अर्को विपरित धुर्वको कुनासम्म पुग्न साढे सात मिनेट लाग्छ भने पुरै वाक वे लाइन घुम्न करिब १५ मिनेट लाग्छ ।
रिङ भवनको एक्सटेरियर (बाहिरी भाग) ३६ देखि ४७ फिट लामो कर्भ्ड ग्लास प्यानलबाट निर्माण गरिएको छ । यसले गर्दा भवनबाट बाहिरको प्यानोरमिक दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
एप्पल पार्कलाई एकदमै खुल्ला स्थानको रुपमा डिजाइन गरिएको छ । कर्मचारीहरुबीच आइडियाहरु स्वतन्त्ररुपमा सजिलै प्रवाह हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले भवनलाई त्यसरी डिजाइन गरिएको कम्पनीले बताएको छ ।
कर्मचारीहरु सहकर्मीबाट डिस्ट्रयाक्ट (एकाग्र हुन नसक्नु) हुनुको सट्टा गहिरो ध्यानमा रहन सकुन् भनेर अफिस स्पेसलाई पोड वा खुल्ला स्पेसको रुपमा निर्माण गरिएको छ । तर एप्पलको भवन निर्माणको यो अवधारणा प्रति सबैजना कर्मचारी खुशी थिएनन् ।
त्यसताका एप्पलका कति कर्मचारीहरुले प्रविधि पत्रकार जोन ग्रुबरलाई एप्पलको खुल्ला फ्लोर योजनाको आलोचना गर्दै गुनासो सहितको पत्रसमेत लेखेका थिए । यति मात्र होइन एप्पलको पारदर्शी ढोका तथा भित्ताहरुलाई लिएर धेरैले गुनासो समेत गरे ।
वास्तवमा एप्पलका दुई कर्मचारी त पारदर्शी सिसामा ठोक्किदाँ घाइते भएर अस्पताल समेत भर्ना भए । त्यसैले पछि पारदर्शी झ्याल ढोकालाई चिनाउन कमर्चारीहरुले रङ्गी विरङ्गी कागजका टुक्राहरु झ्याल ढोका र भित्ताहरुमा टाँस्ने गरेका थिए । तर त्यसले भवनको डिजाइनलाई बिगारेको भन्दै हटाइएको थियो ।
एप्पलले कर्मचारीबीच अन्तरक्रियालाई बढावा दिन रिङभित्रै एउटा ठूलो रेस्टुरेन्ट निर्माण गरेको छ । ५८ हजार वर्ग फिटको यो रेस्टुरेन्टमा कर्मचारीहरु खाना खाँदै कुराकानी गर्न सक्छन् । एप्पलले रेस्टरेन्टलाई क्याफे म्याक्स नामाकरण गरेको छ ।
यसमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ग्लासका चार स्ट्रोय स्लाइडिङ ढोकाहरु छन् । एप्पलले कति सूक्ष्म विवरणको पनि ख्याल राख्छ भन्ने कुरा उसले आफ्नो पिज्जा बक्सको प्याटेन्ट अधिकार लिएको कुराबाट नै प्रमाणित हुन्छ ।
एप्पलले निर्माण गरी प्याटेन्ट अधिकार लिएको पिज्जा बक्सले पिज्जाको क्रस्ट (तल्लो भाग) लाई ओसिलो हुनबाट सुरक्षित राख्दछ । यसबाहेक रिङभित्र तपाईंको आखाँले सजिलै देख्न सक्ने भन्दा अन्य धेरै कुराहरु पनि लुकेर बसेका छन् ।
रिङभित्र सेतो रिफ्लेक्टिभ (परावर्तन हुने) टाइलबाट निर्माण भएको दुई तले पार्किङ ग्यारेज छ । यसमा गोलाकार सेतै टाइल राखिएको सिलिङ, स्ट्रिट साइनसँग मिहिनरुपमा एकीकृत भएका ट्राफिक बत्ती सबै कुरा छन् ।
यसैले गर्दा एप्पलका कर्मचारीहरु एप्पल पार्कभित्रका सुन्दर दृश्यलाई नियाल्दै परिसर वारपारको यात्रा गर्न सक्छन् । वास्तवमा एप्पल पार्कभित्रको भूपरिदृश्य आफैमा एउटा महत्वपूर्ण फिचर हो ।
एप्पल पार्कभित्रै नौ हजारभन्दा धेरै विशेष रुख विरुवाहरु (इन्डिजिनियस) रोपिएका छन् । एप्पल पार्कको परिदृश्य संरचनाका आधारमा मात्र सुन्दर छैन । यी त वास्तवमा खडेरी र सुख्खा याम प्रतिरोधी पनि छन् ।
क्याफे नजिकै आँगनमा एप्रिकोट, ओलिभ, एप्पल अर्किड्स तथा विभिन्न जडिबुटीका बगैंचाहरु छन् । एप्पलले आफ्नो मुख्य रिङ भवनकै आकारमा परिसरभित्र एउटा कृतिम पोखरी पनि निर्माण गरेको छ ।
यसबाहेक एप्पलको एउटा इन्द्रेणी आकारको (रेक्टेङ्गुलर) मन्च पनि छ । विभिन्न पर्फमेन्स तथा भाषणको समयमा यसलाई एप्पलले आफ्नो स्टेजको रुपमा प्रयोग गर्दछ ।
उक्त स्टेजलाई जोनाथन इभ, फोस्टर र साथीहरुले डिजाइन गरेका थिए । स्टेजमा एप्पलको प्रारम्भिक लोगोमा देखिएने इन्द्रेणी रङ्ग प्रयोग भएको छ । यसको संरचनाको कुरा गर्दा यो इन्द्रेणी रङ्गयुक्त कोलाकार आर्क आकारको यो स्टेजमा विभिन्न लाइटिङ उपकरणहरु फिट भएका छन् ।
तर अहिलेसम्म हामीले कुरा गरिरहेको रिङ भवन एप्पल पार्क परिसरको एउटा विशेष भवन मात्र हो । यसबाहेक यसको परिसरमा अन्य धेरै भवनहरु पनि छन्, जसको आफ्नै महत्व र अर्थ छन् ।
यदि तपाईं परिसरको उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा जान चाहनुहुन्छ भने कम्पनीको ग्रे एप्पल साइकल प्रयोग गरी त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ । त्यहाँ तपाईंले एउटा पुरानो सानो भवन देख्नुहुन्छ, जुन एप्पलको अत्याधुनिक भवन र परिसरमा निकै अमिल्दो देखिन्छ ।
वास्तवमा यसको नाम ग्लेनडेनिङ बर्न हो । जुन एप्पलले निर्माण गरेको भवनमा पर्दैन । सन् १९१६ मा निर्माण भएको यो बर्न एप्पलले भवन निर्माणका लागि खरिद गरेको जग्गाभित्र पर्न गएको हो ।
एप्पलले यसलाई भत्काउन चाहेको पनि थियो । तर सन् २००४ मा ऐतिहासिक क्षेत्रको रुपमा कर्पेन्टिनो सहरले घोषणा गरेपछि यसलाई सुरक्षित राख्न एप्पल बाध्य भएको हो । हाल कम्पनीले यसलाई आफ्नो मर्मत सम्हारका समानहरु भण्डारण गर्ने भवनको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ ।
ग्लेनडेनिङ बर्न नजिकै अर्को एउटा ठूलो भनव छ । जुन एप्पलले नै निर्माण गरेको भवन हो । यो एक लाख बर्ग फिटको एउटा फिटनेस तथा वेलनेस सेन्टर हो ।
यसभित्र चेन्जिङ रुम, सावर, लन्ड्री सेवा, ग्रुप वर्काउट रुम र ढुङ्गाबाट निर्मित दुई तले योगा रुम छन् । दक्षिणतिर जानु भयो भने तपाईंले एउटा स्पोर्ट्स फिल्ड देख्नुहुनेछ ।
जहाँ कर्मचारीहरुले बास्केटबल र टेनिस गेम खेल्न सक्छन् । यसबाहेक अझ दक्षिणतिर जानु भयो भने एप्पल पार्क सेन्ट्रल प्लान्ट छ । जुन दक्षिणतिरको पार्किङ ग्यारेजसँग जोडिएको छ ।
सेन्ट्रल प्लान्टमा फ्युल सेल्स, ब्याकअप जेनेरेट्स, कन्डेन्सर वाटर स्टोरेज, हट वाटर स्टोरेज, इलेक्ट्रिकल सबस्टेसन, पानी तथा आगोको पम्प र चिलर्स जस्ता युटिलिटी उपकरणहरु राखिएका छन् ।
पार्किङ ग्यारेजमा नौं हजार कर्मचारीहरुका लागि वर्किङ स्पेस छ भने कूल १४ हजार दुई सय गाडीहरुका लागि पार्किङ स्पेस पनि छ । दक्षिणी ग्यारेजदेखि पूर्वतिर जाँदा तपाईंले अर्को भवन स्टिभ जब्स थिएटर देख्नुहुनेछ ।
कर्भ्ड ग्लास प्यानलले निर्माण गरेको यो एउटा गोलाकार भवन हो । जसको माथितिर विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कार्बन फाइबर छत छ ।
यो भवनको बारेमा धेरै आश्चर्यजनक तथ्यहरु रहेका छन् । जसको बारेमा अहिले बताउन सम्भव छैन । तर यसको संरचनाको बारेमा छोटकरीमा कुरा गर्दा यो भवनमा वास्तविक थिएटर तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यो अन्डर ग्राउण्डमा छ ।
त्यहाँसम्म पुग्न दुई वटा बाटा छन् । पहिलो सुन्दर तरिकाले निर्माण भएका कर्भ्ड सिढीँ हो र दोस्रो भनेको ग्लास इलिभेटर अर्थात लिफ्ट हो । यो थिएटरभित्र ९२१ जना अट्ने ठाउँ छ । जुन एप्पलको पुरानो टाउन हलभन्दा तीन गुणा ठूलो हो ।
स्टिभ जब्स थिएटरको मूख्य हिस्सा अण्डर ग्राउण्डमा छ । तर यो एप्पल पार्ककै सबैभन्दा उच्च भागमा निर्मित छ । यो भवन स्टिभ जब्सको सम्मानमा उनको नामबाट राखिएको हो ।
थिएटरबाट उत्तरपूर्वी भागतिर लाग्नु भयो भने त्यहाँ भिजिटर सेन्टर छ । सार्वजनिक भ्रमणका लागि खुल्ला एप्पल पार्कभित्रको यो एकमात्र भवन हो । दुई तले यो भवनभित्र मुख्य चार भाग छन् ।
एउटा भागमा एप्पल स्टोर छ । जसमा टिसर्ट, ब्याग, टोपी, पोस्ट कार्ड जस्ता विभिन्न बिक्रेताका सामानहरु शोकेसको रुपमा राखिएका छन् ।
त्यस्तै अर्को १२ सय वर्ग फिटको क्याफे छ । जहाँ एप्पल पार्कको थ्रीडी मोडल शोकेस गरिएको प्रदर्शनी क्षेत्र पनि छ ।
यहाँ अग्मेन्टेड रियालिटीको प्रयोग गरेर आगन्तुकले विस्तृतरुपमा एप्पल पार्कका सबै कुरा हेर्न सक्छन् । अर्को भनेको माथिको छत हो, जहाँबाट सम्पूर्ण क्याम्पसलाई हेर्न सकिन्छ ।
भिजिटर सेन्टरमा एउटा अण्डरग्राउण्ड पार्किङ ग्यारेज पनि छ । जहाँ सात सयवटा गाडीहरु राख्न सकिने खाली ठाउँ छ । तर अहिले यो पाँच अर्ब डलरको मूख्यालयले निकै सकरात्मक आलोचना पनि बटुलिरहेको छ ।
अत्यन्तै खर्चिलो र धेरै पर्फेक्सनिस्ट भएको आरोप यसमाथि लाग्दै आएको छ । तर एप्पल पार्क वास्तवमा स्टिभ जब्सले एप्पलका लागि सपना देखेको एउटा सिङ्गो संरचना हो ।
एप्पलका अर्का सह संस्थापक टिम कूकको शब्दमा भन्नु पर्दा, ‘एप्पल पार्कभर स्टिभको भर्सन रिफ्लेक्ट हुन्छ । आफूले सपना देखेको यो ठाउँ उनी भएको भए निकै मन पराउँथे होला । यो एप्पलको भावी नवप्रवर्तनको घर र प्रेरणा हो ।’
Previous articleतेलमा अस्वाभाविक मुत्य वृद्धि छ ?
Next articleकृष्ण भगवान ले सबै को रक्षा गरून् , आज जेष्ठ २३ गते आइतबार ,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का प्रवक्ता किरण राईले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। सोमबार उनले वरिष्ठ उपाध्यक्षको रोहबरमा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई राजीनामा पत्र...
कैलालीको टीकापुरमा मोबाईल पसलमा आगलागी, कति को क्षति भयो
कैलालीको टीकापुरमा मोबाईल पसलमा आगलागी भएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ नारायणपुर चौराहमा रहेको अशोक मोबाईल ग्यालरीमा आगलागी भएको हो। वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष...
बढ्यो सुन चाँदीको मूल्य, अब तोलाको कति भयो त ?
आज शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । हिजो विहीबार प्रतितोला ९० हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज प्रतितोला ९० हजार ७००...
२७ जेठ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले केपी शर्मा ओलीको आग्रहमा राष्ट्रपतिद्वारा जारि...
टाउको दुखेमा के गर्ने ? धेरै टाउको दुखयो भने अन्य खतर्नाक रोग पनि लेउछ...
केहि केसहरुमा टाउको दुखाइ टाउकोमा लाग्ने झण्डाको परिणाम हुनसक्दछ वा विरलै, धेरै गम्भीर मेडिकल समस्याको संकेत हो। तनाव भावनात्मक तनाव र डिप्रेसनका साथै मदिराको...